Saka waita pakupedzisira mazviita. Iwe waisa mukati zororo rako kubasa, Akatenga wako Ndege matikiti uye vakananga kuna Hungary kuti zvakakodzera pazororo. Uye apo ndicho tsime zvose uye zvakanaka – shure kwezvose, Budapest ndiro guta rakanaka – urege kuzoitengesazve pachako pfupi chete yakasara vakakomba guta. Europe ndiro mukondinendi zvakanaka-kwakabatana zviuru nzira kuti chitima kufamba, uye izvi zvinosanganisira Hungary. Saka kamwe waita aona Szechenyi Thermal monument uye vainakidzwa yemafuta panguva Beer Spa, musoro muguta rimwe izvi 3 zvakanakisisa Budapest zuva nzendo nechitima.
Unoda embed yedu Blog romukova “3 Best Budapest Day Trips By Train” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-budapest-day-trips-train%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#daytrip #traveleurope Budapest Masikati Train Travel TravelBudapest TravelPrague TravelVienna
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Britain, Chitima Kufamba China, Train Travel Czech Republic, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Italia